दक्षिण कोरियामा लगातार तेस्रो दिन संक्रमित भेटिएनन् « Khabarhub
दक्षिण कोरियामा लगातार तेस्रो दिन संक्रमित भेटिएनन्
Pedestrians wearing face masks walk through in the nightlife district of Itaewon in Seoul on May 12, 2020. – South Korean authorities were using mobile phone data on May 12 to trace Seoul nightclub visitors as they try to tackleacoronavirus cluster, they said, promising anonymity to those being tested due to the stigma surrounding homosexuality. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
एजेन्सी- रोजगारीका लागि लाखौं नेपालीहरु रहेको दक्षिण कोरियामा लगातार तेस्रो दिन पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । न्यूज एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार त्यहाँ तेस्रो दिन २० भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण देखिएको हो ।
संक्रमितमा ८ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । यहाँ कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म २६६ जनाको मृत्यू भइसकेको छ । यहाँको मृत्यूदर २.३८ रहेको छ ।
यहाँ कोरोना परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउँदै जनवरी ३ पछि ८ लाख २० हजारभन्दा बढी मानिसको परीक्षण गरिएको थियो । यीमध्ये ७ लाख ८८ हजार ७६६ मानिसमा नतिजा नेगेटिभ भेटिएको थियो । पछिल्लो समय पनि सरकारले २० हजार ३३३ नमूना परीक्षण गरिरहेको छ ।
दक्षिण कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने तर लकडाउन नगर्ने राष्ट्र हो । यहाँको कोरोना नियन्त्रणको तरिका संसारभरी चर्चा हुने गर्दछ ।
दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म ११ हजार १९० कोरोना संक्रमित भेटिएकोमा १० हजार २१३ जना निको भइसकेका छन् । ७११ जना उपचाररत छन् भने १५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०७७, आइतबार १ : ५४ बजे